Pulp tireyi, richigadzirisa Pulp tireyi, Packaging tireyi - Dingtian
Tiantai Dingtian Kuteedzera Co, Ltd.
Tiantai Dingtian kavha Co., Ltd. inyanzvi fekitori inopa yakakwira-magumo nyoro yekudhinda yakaumbwa pulp kuputira zvinhu uye mhinduro, sangana neyakanaka dhizaini sevhisi, CNC michina sevhisi, kugadzirwa kwemazhinji uye logistic sevhisi.
Hwakagadzwa muna 2014, kambani iri iri Tiantai County, Zhejiang dunhu, nyika 5A yevedza gwapa pamwe nzvimbo dzokuona dzakanaka. Iye zvino fekitori yedu inodarika 6500 mativi emamirimita uye ine vashandi vanopfuura zana. Mumakore matanhatu apfuura, isu takagara tichisangana nezvinodiwa nevatengi vane zvirinani zvigadzirwa uye tekinoroji rutsigiro uye mushure mekutengesa sevhisi. Iye zvino tave hombe-diki, emazuva ano uye ehunyanzvi epamusoro-magumo akaumbwa fiber ekugadzira mabhizinesi ane mukurumbira wakanaka.
Cosmetic MF Bhokisi
Akasungwa Pulp Tereyi, Chikafu Packaging Bhokisi, Kurumidza Chikafu Packaging Bhokisi, Chikafu Giredhi Kuteedzera Pulp Mabhokisi, Mhando dzese dzeKudhaya Kuputira Pulp Holder, Kudhaya Kuputira Pulp Holder,